Biyyi “Tophiyaa” Jedhamtuu Ummata Oromoof Mana Gabrummaati! | Fighting for Freedom and Equality
Posted by Gishe Abdi Wako on March 31, 2014
Kan nu baasuuu waal qoduu osoo hin tanee tokkummaa jabessuu. walirraa fagachuu osoo hin tanee walitti dhinyaan mari’achuu. bakka adda addaatti wal qoduu osoo hin tanee kan kayyoo ganamaa ABOjalatti wal gurmeessuu. Dhaba kenyaa (ABO) kan ijii hunda kenyaa akka banamtu taaasisee har’aan gahee jiruu kana irratti hololuu osoo hin taanee waan danda’amu hundaan jajjabeessuu, humnaafi beekumsa qabnu hundaan kessatti hirmaachuu. Wal Abaaruu osoo hin taanee wal jajjebessuu, wal mararfachuu, waliin dhabbachuu, ta’aani walirratti hololu osoo hin taanee ka’ani murannoon qabsoo bilisummaaf dhaabacchuu, gumachuu. Dandii mataa ofii osoo hin taanee dandii ummatni bal’aa barbaaduu irra deemuu … KessattuuDargaggootnii dirqamni guddan nurraa jiraa.Galatoma
* Miliyon can be reached at Miliyontaddesse@gmail.com
← Etiopia: Intervju med Girum
Hassen Sheikh Bashir Dade, 55, Arsi Negele →